मार्सी भातमा बिक्यो समाजवाद, क्रोनी क्यापिटलिजम अबको अर्थनीति « GDP Nepal
( Thursday, March 4, 2021)
मार्सी भातमा बिक्यो समाजवाद, क्रोनी क्यापिटलिजम अबको अर्थनीति
Published On :9July, 2018 9:25 am
काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भक्तपुरस्थित एक रहस्यमय र विवादास्पद व्यापारीको घरमा सँगै खाना खाएको तस्बिर अहिले पनि भाइरल भइरहेको छ ।
तस्बिरमा घरधनी तथा उक्त भेटघाटमा सूत्राधार भनिने दुर्गा प्रसाईं पनि सँगै छन् । देशमा २ सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तिको सम्बन्ध चिसिएका बेला आफ्नै घरमा मार्सी चामलको भातसहित अग्र्यानिक ब्यञ्जन खुवाउने यी प्रसाई अहिले चर्चामा छन् ।
प्रसाईको प्रस्तावित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन ओली र दाहालले आफ्नो राजनीतिक जीवन नै दाउमा राखेका छन् । आफूलाई माओवादी युद्धमा सहभागी भएको दाबी गर्ने प्रसाई खासमा भने रहस्यमय ढंगले उदाएका व्यापारी हुन् । उनको नाममा देखिएको हालको अर्बौं सम्पत्ति माओवादी नेताहरुले नै विगतमा युद्धकालमा बैंक लुटेको तथा चन्दा संकलनको हो भन्ने गरिन्छ भने कतिपयले सत्तामा आएपछि संकलित रकममध्येकै लगानी हो पनि भन्ने गरिन्छ ।
नेपालमा सत्तानिकट व्यक्तिहरुले जतिसुकै रकम परिचालन गरे पनि जहाँ जेजति लगानी गरे पनि खोजिनीति गर्ने चलन छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन त छ तर यसको कार्यान्वयनका लाथि तिनै सत्ताधारी नेताहरुको ग्रीन सिग्नल चाहिन्छ ।
प्रसाई पनि यसरी सत्ताधारीबाटै संरक्षित व्यापारी हुन् । मेडिकल कलेजमा एउटै विद्यार्थीाट करोड रुपैयाँसम्म संकलन गरेर रातारात धनी हुने सपना पाल्नेमा प्रसाईमात्र छैनन् । नेपालकै अति धनाढ्य मानिएका उपेन्द्र महतोदेखि तत्कालीन एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेसम्म मेडिकल कलेजका लागि मरिहत्ते गर्नेमा पर्छन् ।
प्रसाईको झापामा रहेको प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन तथा महतो र पाण्डेको लगानी सुरक्षित गर्नमात्र नभइ पार्टीनिकटका बसुरुद्धिन अन्सारीको घट्टेकुलोमा बिक्री नभएको अपार्टमेन्टमा ब्यानरमात्र टाँगिएको नेशनल मेडिकल कलेज नाउँको टहरोलाई अनुमति दिनु यतिबेला सत्ताधारीको प्रमुख उद्देश्य बनेको छ ।
दुर्गमको जुम्लामा मेडिकल कलेज खुल्नुपर्छ र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि नियमन र अनुगमनको भरपर्दो कानुन नभइ अन्यत्र सम्बन्धन दिनु हुँदैन भनेर अनसन बसेका प्रा. डा. गोविन्द केसी भने खलनायक भएका छन् र प्रसाइहरु नायक । यसको मलजल स्वयं
प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासम्मले गरिररहनु झनै रमाइलो छ ।
यसरी, नेपालमा सत्ताधारी निकट व्यवसायीलाई पोस्ने क्रोनी क्यापिटलिजम खुलेआम फस्टाइरहेको छ भने जीवनभर समाजबादका लागि लडेको भनिएको केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको समाजवाद भने एक थाल मार्सी भातमै विक्री भएको छ । नेपाललाई त्यसै भनिएको हैन– सतीले सरापेको देश ।
अरुण थ्री निरीक्षणमा हाइकमाण्ड, चार सचिवले गरे स्थानीयसँग छलफल !
काठमाडौ । नेपाल सरकारका चार सचिवले निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनास्थल अवलोकन गरेका छन् ।
महानगरभित्र आठवटा आकाशेपुल थपिँदै, पुरानाको मर्मत गरिँदै
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ आकाशे पुल निर्माणसँगै र जीर्ण रहेकाको मर्मतको
ज्योति लाइफको आईपीओ शुक्रबारबाटै
काठमाडौं । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको प्राथमिक सेयर निष्कासन शुक्रबारबाटै हुने भएको छ । कम्पनीको सेयर
पर्यटन बोर्डको भूमिकाप्रति व्यवसायीका गुनासै गुनासा
काठमाडौं । कोभिडका कारण चरम संकटमा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन सरकारले कुनै चासो नदेखाएको
टेलिकमको ४० प्रतिशत बोनसः साधारणसभा चैत १३ मा, सञ्चालक पनि चयन गर्ने !
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ४० प्रतिशत